ဝါးခယ်မ : မြသိန်းတန် စေတီတော် ဘက်စုံ မွမ်းမံခြင်း ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းများ
မြသိန်းတန် စေတီတော် ဘက်စုံ မွမ်းမံခြင်း ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းများ
၀ါးခယ်မမြို.အရှေ.ပိုင်း မြသိန်းတန် ရပ်ကွက် ရှိ သမိုင်းဝင် မြသိန်းတန် စေတီတော်မြတ် ကြီးကို ယခုအခါ ဘက်စုံမွမ်းမံလျှက်ရှိပါသည် ။ယခင်တည်ရှိခဲ့ပုံများနှင်. ယခုအခြေအနေ တို.ကို မှတ်တမ်း တစ်ခုအနေဖြင်. စုစည်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည် .
၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာလ မြင်ကွင်း
၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာလ စတင်မွမ်းမံစဉ်
၂၀၁၃ မေလ ဆန်းပိုင်း
စေတီတော်မြတ် ၀င်းအတွင်း ကမ်းနားဘက် မ္မာရုံ တွင် သိတင်းသုံးသော ဆင်းတုတော်ကြီးများ ၏ မူလ တည်ရှိပုံနှင်. ယခု အခြေအနေ
စေတီတော်မြတ် ၀င်းအတွင်း အသစ်တည်ထားကိုးကွယ်တော်မူသော နဂါးရုံ ဆင်းတုတော် တည်ထားပုံ အဆင်.ဆင်. ဖြစ်ပါသည်
ဆက်စပ်ဖတ်ရှု၇န်များ -သဒ္ဓါ တရား အတွက် နှိုးဆော် ချက် လေးပါ- မြသိန်းတန် စေတီတော်
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 11:57 AM
Labels: ၀ါးခယ်မ မြို. ရှိ ဘုရားစေတီများနှင်. သမိုင်းအကျဉ်း